Wool Felt, Akanzwira Krisimasi pendant, Synthetic Felt - Huasheng
Hebei Huasheng Felt Co, Ltd yakavambwa sebhizinesi hombe remabhizimusi rakakwenenzverwa, machira asina-kurukwa muna1970, uye iri muNongong & Shijiazhuang, China. Isu tiri musana we China isina-yakarukwa machira indasitiri, uye yakarongedzwa inotsigira inogadzira yeChina Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380). Uye inosanganisira yekudyara uye yekutengesa kambani: SJZ SINO-SAINT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, zvigadzirwa zvinotumirwa kune ese pasirese.
Hebei Huasheng Felt Co, Ltd yakavambwa sebhizinesi hombe remabhizimusi rakakwenenzverwa, machira asina-kurukwa muna1970, uye iri muNongong & Shijiazhuang, China.
Isu tiri musana we China isina-yakarukwa machira indasitiri, uye yakarongedzwa inotsigira inogadzira yeChina Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380).
IZVI ZVINOGONESESA ZVAKAWANDA
Type T112 112 122 132 Density (g / cm3) 0.10-0.50 0.10-0.43 0.30-0.42 0.25-0.35 Kubata (mm) 0.5-70 2-40 2-40 2-50 Wool giredhi Austrian Merino Wool Chinese Wool Chinese Wool Colour Natural White / grey / dema kana Pantone ruvara Width 1m Kureba 1m-10m Technics Wet yakamanikidzwa Certification ISO9001 & SGS & ROHS & CE, nezvimwewo 1.Firm. Mabhawa efaibhi akabatanidzwa pamwe chete zvakasimba uye haangabudiki. 2.Abriding kuramba. Iyo yakatsindirwa yehudzi yakanzwa ine yakasimba chimiro iyo iri abrasion ...
Mabhola eWoer akaomeswa anogara achigadzirwa ne100% New Zealand mvere. Hazvizoregi uye zvichagara kwemakore. Saizi yavo yakaringana nehupamhi hwekuomesa basa zvakanyanya. Iwo akanakira fluffing pasi minhenga zvinhu zvakadai quilts uye jaketi. Uchishandisa mabhinda akaomeswa emucheka anochengetedza ganda rako kubva kumakemikari anoshandiswa mumashamba akaomesesa uye mumucheka wemachira zvinyoro, uye zvakare rino chengetedza pakaomarara pane zvakasara zvasara pane izvi. Iyo yakasarudzika hupfumi kune emakemikari-akaremerwa uye ane chepfu maomesa mashitsi uye machira anofefetera. Th ...
Neichi magirazi akanzwa kesi, unogona kuisa magirazi ako zvakachengeteka uye uchengete wakachena. Chikwama chemagirazi ano shandisa Slip mune yakavhurika dhizaini, iwe unogona nyore kuisa mukati uye kutora magirazi ako. Iri rakanzwika magirazi emabhegi harisi chete rinogona kutakura magirazi, asiwo makiyi, makadhi, lipstick, uye zvimwe zvinhu zvidiki. Uchishandisa akanzwa pamusoro, ichi magirazi ebhokisi bhokisi rakapfava uye rakagadzikana kubata, fashoni kadiki chikwama. Iri ziso remagirazi rakakodzera saizi yemagirazi akaenzana, magirazi ekuchengetedza, anti-glare compu ...
Acoustic Panels inogadzirwa kubva ku100% PET, nekupinza sindano kugadzirisa. Maitiro ekugadzira aya akazara epanyama & eco-inoshamwaridzika, hapana tsvina mvura, kubuda, marara, hapana zvinonamatira.Our polyester fiber Acoustic Panels vanobatsirwa nekuwanda kwezvakanakira, ivo vanotora kudzoreredzwa kurira, vachipa acoustic kutonga kudzora huwandu hwe ruzha mune ruzha. kamuri. Yedu PET acoustic panera Asina-chepfu, asina-allergenic, asingatsamwisi uye haana ane formaldehyde binders uye ane yakakwirira NRC: 0.85.100% polyester a ...
Item Felt coasters & placemats Chinyorwa 100% merino mvere Thickness 3-5mm Ukuru 4 × 4 '', kana yakagadziriswa Rudzi rwePantone ruvara Shapes Round, hexagon, mraba, etc. Inogadzirisa modes Die kutemwa, laser kutemwa. Kudhinda sarudzo Sirkscreen kudhinda edhijitari kudhinda kwemairiya anodhinda anodhinda. Logo sarudzo Laser Scanning, silkscreen, yakarukwa lebel, yeganda yakashongedzwa, etc. Isu 100% mvere dzakanzwikawo zvekare zvakasikwa, zvinowanikwazve sosi zvinoreva kuti haina mhaka yezvinhu zvine chepfu. Izvo & ...